သမိုင်းဘူတာရုံ သံလမ်းဘေးတွင် ရောင်းချနေသည့် ပျံကျဈေးသည်များအား မီးရထားပိုင်မြေပေါ်တွင် မ? - Yangon Media Group
သမိုင်းဘူတာရုံ သံလမ်းဘေးတွင် ရောင်းချနေသည့် ပျံကျဈေးသည်များအား မီးရထားပိုင်မြေပေါ်တွင် မ?
သမိုင်းဘူတာရုံသံလမ်းဘေးတွင် ရောင်းချနေသည့် ပျံကျဈေးသည်များအား မီးရထားပိုင်မြေပေါ်တွင် မတ်လအတွင်း ဆိုင်ခန်းတစ်ခန်းလျှင် ငါးပေပတ်လည်ဆိုင်ခန်းများ ဆောက်လုပ်ချထားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ”ဒီမီးရထားပိုင်မြေနေရာမှာ ဆိုင်ခန်းဆောက်လုပ်ဖို့ တင်ဒါပေးပြီးပြီ။ တင်ဒါရသွားတဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ G3 Group ဖြစ်တယ်။ လက်ရှိမှာ ဈေးဆောက်လုပ်နေပါပြီ။ တင်ဒါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရတော့ မတ်လကုန်မှာ ပြီးစီးရမယ်ဆိုပြီး စာချုပ်ချုပ်ထားပေမယ့် မတ် ၁၅ ရက်လောက် ပြီးမယ်လို့ မှန်းထားတယ်”ဟု မြန်မာ့မီးရထား၊ တိုင်းအမှတ်(၇)မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ပျံကျဈေးသည်များအား ပြောင်းရွှေ့ပေးမည့်နေရာမှာ သမိုင်းဘူတာနှင့် လူကူးခုံးကျော်တံတား၏ ကြားနေရာဖြစ်ပြီး ခုံးကျော်တံတားနှင့် ပေ ၂ဝဝ အကွာတွင် တည် ဆောက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မီးရထားပိုင်မြေပေါ်တွင် ပြန်လည်နေရာချထားပေးမည့် ပျံကျဈေးသည်ပေါင်း ၃၈ဝ ရှိသော်လည်း ဆိုင်ခန်းပေါင်း ၄ဝဝ ဆောက်လုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး တည်ဆောက်ပေး မည့်နေရာမှာ ယခင်က အမှိုက်ပုံဖြစ်နေ၍ မြေသားမာကျောခြင်းမရှိခြင်းကြောင့် ဈေးလမ်းနှင့် ဆိုင်ခန်းအား ကွန်ကရစ်လောင်းပေးကာအမိုးကို မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”ဒီကနေ့အစည်းအဝေးမှာတော့ ဖွင့်ဖို့ကိစ္စ မပြောသေးဘူး။ မဖွင့်ခင်မှာ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ဖို့အတွက် အခုလက်ရှိ အမှိုက်ပုံကြီးကိုရှင်းမယ်။ ဈေးဖွင့်ပြီးသွားရင်လဲ ထွက်လာတဲ့အမှိုက်တွေကို ရှင်းဖို့နဲ့ ဈေးကော်မတီဖွဲ့ဖို့နဲ့ ၁ဝ ဦး ကော်မတီ ရွေးခိုင်းထားတယ်။ ဈေးသူ ဈေးသားတွေကိုပဲ ၁ဝ ဦးကော်မတီဖွဲ့ဖို့ ပြန်ရွေးခိုင်းထားတယ်”ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။ မကြာမီအချိန်တွင် ရထားသံလမ်းအား အဆင့်မြှင့်တင်မှုဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ခြင်း ကြောင့် ရထားပလက်ဖောင်းများအပေါ်နှင့် သံလမ်းများအပေါ်တွင် ဈေးရောင်းချနေ ခြင်းမှာ အန္တရာယ်များခြင်းကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းပေးရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ ကုသသည့် ဆေးဝါးက ကလေးများကို မသန်စွမ်း ဖြစ်စေနိုင်ဟု ဆို
အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဏိပူရပြည်နယ် စက်မှုကုန်သည်များမှ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်း အထူးစီးပွား?
၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံး၌ သတင်းစာဆရာ ၆၃ ဦး အသတ်ခံရ